Ukuthengisa ngokufutshane-i-NJ kunye ne-NY yeNdawo yokuThengisa, ukuKhuselwa, ukuKhuselwa kwembonakalo kunye nabaGwebi beebhenki
ikhaya / Ukuthengisa kufutshane
Ingxoxo emfutshane yokuthengisa kufutshane ingxoxo phakathi kwamaqela amabini nangaphezulu ngenjongo yokufumana isiphumo esisiphumo xa lowo ubolekayo engaphantsi kwamanzi kwityala lakhe kwaye angathanda ukukuphepha ukubonwa. Amaxesha amaninzi sinabaxumi abathi bafuna ukuthengiswa okufutshane, kodwa eneneni banokulingana kwipropathi yabo. Sidla ngokuchaza imeko yabo size sibakhokelele kumthengisi wezindlu ukuze enze uluhlu oluqhelekileyo. Siza kusebenza nomthengisi emva koko ukuba bafuna uncedo ngokuvala, okanye ukufumana ixesha elingakumbi lokuvala ukuba ibhanki ijonge phambili kwimpahla yabo.
Nangona kunjalo, xa ukuthengiswa okufutshane kukuphela kwenketho njengoko umthengi angathanda ukuphepha ukubekwa phambili kwirekhodi labo, eyona ngxaki inkulu yothetha-thethwano olufutshane kuxa umthengisi woluhlu engazi ukuba benzani. Ukuba iarhente yoluhlu ayisebenzi kwaye ilahlekile amaxabiso ekhaya, ikhaya alindifaneli ukufumana abathengi abathembekileyo okanye ixabiso liya kuba phantsi kakhulu ukuba ibhanki ingathatha amathuba abo malunga neSheriff yokuthengisa.
Buza ixesha lakho lokufumana iqela elichazayo elingelolakho ukuba ujonge kwi-perfohttps: //www.youtube.com/watch? V = t8uItoC8f34rm intengiso emfutshane. Sincoma ukuQalwa kweRhwebo ngokuBona ukuHlaliswa kuyo nayiphi na intengiso nokuba kunjalo ukuthengiswa rhoqo okanye okufutshane.